Mugabe Archives - MetroBusinessNews | MetroBusinessNews
Robert Mugabe Zimbabwe’s long-time president Robert Mugabe has agreed to the terms of his resignation and a letter has been drafted, an official source with direct knowledge of negotiations told CNN. The source More...
Mugabe Thousands of Zimbabweans flooded the streets of Harare on Saturday, waving national flags, singing and dancing in an outpouring of elation at the expected fall of President Robert Mugabe. “These are tears More...
Robert Mugabe The ousted Zimbabwean President Robert Mugabe has been rejected by Congress of the People (Cope), an opposition party in South Africa. The party said it rejects calls to offer Zimbabwean President More...
Mugabe The U.S. is seeking “a new era” for Zimbabwe, the State Department’s top official for Africa said, implicitly calling on long-time President Robert Mugabe to step aside as a political crisis mounts. In More...
Mugabe airport Zimbabwean President Robert Mugabe, the world’s oldest head of state, refused to resign during a crunch meeting Thursday with military generals who have seized control of the country. Although he More...
By metro On Thursday, November 16th, 2017
Robert Mugabe President Robert Mugabe is insisting he remains Zimbabwe’s only legitimate ruler, an intelligence source said on Thursday. The source said Mugabe is resisting mediation by a Catholic priest to allow More...
Mnangagwa President Robert Mugabe of Zimbabwe on Monday fired Emmerson Mnangagwa as vice president, Information Minister Simon Moyo said. Mnangagwa, a 75-year-old former intelligence chief, has been heavily-criticised More...
Zimbabwean President Robert Mugabe on Wednesday called for the return of the death penalty, after more than 50 people applied for the vacant position of hangman. Capital punishment is on the statute book in Zimbabwe, More...